पुराना नेताले समृद्ध नुवाकोटको नेतृत्व गर्न सक्दैनन :उमेश खनाल::Leading Nepal News
नुवाकोट जिल्ला कबिलास गाबिसका स्थायी बासिन्दा हुन उमेश खनाल । त्रीभुवन बिश्वविध्यालयबाट समाजशास्त्र र ग्रामिण बिकासमा स्नातकोत्तर गरिसकेका उनि जिल्लाभित्र नयाँ तर उदयमान युवा नेता मानिन्छन । सानै उमेरदेखी स्थानियस्तरमा हुने जनसरोकारको बिषय, राजनीति आदिमा चासो राख्ने उनि देशको बिग्रीएको राजनिती सुधार्न युवा अगाडी आउनुपर्ने बताउँछन ।
नुवाकोटमा बिकाशको अथाह सम्भावना रहेपनी असल नेतृत्वको अभाबमा यहाँका जनता अझै बत्तिमुनिको अँध्यारो भएर बस्नुपरेको उनि वताउछन । आगामी माघमा सम्पन्न हुने प्रदेशसभा निर्वाचनमा जिल्लाबाट उमेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएका खनालसंग लीडिङ नेपाल न्युजले लिएको अन्तरवार्ता:
के छ हालखवर ?
के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ ?
स्नातकोत्तर सकेको करिव ४/५ वर्ष भयो । यसबिचमा केहि समय शिक्षण पेशा र
अन्यत्र नोकरि गरेँ । अब भने पढाई र समाजसेवालाई संगसंगै अगाडी बढाउने बिचार गर्दैछु । उच्चशिक्षा को पनि तयारी गर्दै छु, यस्तै आफुलाई राजनैतिक कृयाकलापमा पनि सकृय पार्ने योजना छ।
राजनितिमा लाग्ने योजना पनि छ ?
राजनिती साधन होईन साध्य हो । राजनिती आफैँले देश र जनताको हित गर्ने होईन बरु यो राजनिती गर्ने मान्छेको क्षमता, कार्यकुशलता, इच्छाशक्ति र ईमान्दारितामा निर्भर गर्दछ । मेरो चाहना राजनिती गर्ने होईन, राजनितिमा लागेर पद पाईन्छ भन्ने पनि होईन बरु नुवाकोटे जनताको सेवा गर्नेछ । म बिकाशको बिधार्थी भएको नाताले के भन्न चाहन्छु भने गुणस्तरिय र दिगो बिकासका लागी असल राजनैतिक नेतृत्व आवश्यक छ र मेरो उदेश्य सोको परिपुर्ती गर्ने रहेको छ ।
पढेलेखेका युवाको पहिलो रोजाइ युरोप, अमेरिका रहने गरेको छ , तपाई किन त्यता आकर्षित हुनुभएन ?
हेर्नुस हामी नुवाकोटकै माटोमा जन्म्यौँ, हुर्क्यौँ, शिक्षादिक्षा लियौँ, तर हामी जन्मेको ठाउँ सामाजिक आर्थीक रुपमा अझै दरिद्रतम अवस्थामा छ । हाम्रा लाईन एजेन्सी हरुले गरीबि घटेको भनेर दाबी गरेपनी केहि समय अघी राष्ट्रसंघिय निकायले निकालेको प्रतिबेदन हेर्ने हो भने हाम्रो गरीबि कहाली लाग्दो अवस्थामा छ । हाम्रै जिल्ला नुवाकोट र छिमेकी जिल्लाको अवस्था हेर्ने हो भने लाखौँलाख जनसमुदाय जस्ताको टहरोमा कष्टकर जिवन ब्यतित गरिरहेका छन । अथाह जलबिधुतको सम्भावना भएपनी अझै धेरै गाउँमा बिजुलिबत्ती पुग्न सकेको छैन । सडकको पहुँच नपुगेको गाबिस त अनगिन्ती छन । राजनैतिक स्वार्थसिद्धिका लागी हिउँदे ६ महिने सडक डोजर लगेर भत्काउने गरेपनी सो कार्य बालुवामा पानी खनाए सरह भईराखेको छ । पुराना नेताहरु जनताको आँखामा छारो हालेर बिकाशको ढोङ रच्न ब्यस्त छन्, वास्तवमा दिगो बिकाश बिनाको बिकाश बिनाश मात्र हो ।
उसो भए तपाँईसंग नुवाकोट जिल्लालाई समृद्ध पार्ने के योजना छ ?
हेर्नुस बिकास र राजनितीबिच सकारात्मक र अन्योन्याश्रीत सम्वन्ध रहेको हुन्छ । भनिन्छ नि ‘पोलिटिक्स डिटरमाईन्स द फेट एन्ड फर्च्युन अफ द नेसन’ हो समृद्ध राष्ट्र निर्माणको पुर्वशर्त भनेकै असल नेतृत्व स्थापित गर्नु हो । नेता त यहाँ अनगिन्ती छन । हाम्रै जिल्लाको कुरो गर्ने हो भने त यहाँ नेतागिरी नगर्ने मान्छे भेटिनै गार्हो परिसक्यो। ठुला नेताको मनोवृती नै आफु अनुकुल र आफ्ना एसम्यान हरुलाई पद बाँड्दै हिँड्ने रहेको छ । नेता त जनताले छान्ने हो तर यहाँ भइदियो उल्टो जो ठुलो भनौदो नेताको घरमा दिनहुँ जान्छ, उनका नातेदार चाटुकारहरु स्वत: नेता बन्ने यो कस्तो बिडम्वना हो ? हाम्रो जिल्लाको यो दुरावस्ता हुनुमा यो प्रवृती मुख्य कारक हो । अबका युवा यो मनस्थितिवाट मुक्त हुनुपर्दछ । योग्यता, क्षमता, ईमान्दारिता राजनितिज्ञको मापदण्ड हो नकी चाकडी र पैसा ।
आगामी निर्वाचनको तयारी पनि गर्दै हुनुहुन्छ कि ?
कस्तो तयारी गर्दै हुनुहुन्छ ?
हेर्नुस म त यहिँ आफ्नैँ देशमा केहि गर्नुपर्छ भनेर बिदेशको भिसा र स्वदेशको जागिर नभनि यसैमा लागिपरेको मान्छे हुँ । केन्द्रमा बसेर पद र शक्ती को बार्गेनीङ गर्ने होईन गाउँमा पुगेर विकाशको खाका कोर्ने चाहना छ । कतिपय साथिहरुले हालै सम्पन्न स्थानिय तह निर्वाचनमा गाउपालिका प्रमुखमा उमेदवारी दिने सल्लाह दिनुभएको भएपनी मैले लडिन । हाम्रो पार्टिको केन्द्रीय निती अनुसार नै मेरो गाउपालिकामा एमाले उमेदवार लाई सहयोग गरेँ । अब हुने प्रदेश सभा चुनाबमा भने उमेदवारी दिने तयारी गर्दैछु । नुवाकोटका प्रत्यक गाउबस्ती र त्यहाँका जनतासंग विशेष निकटता रहेकोले नुवाकोटबासिको समर्थन पाउनेमा बिश्वस्त पनि छु ।
प्रदेश सभाको चुनाब लड्ने त भन्नुभयो, तपाइँ कुन पार्टीसंग आवद्ध भनेर चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ ?
मेरो सबै पार्टिका नेताहरुसंग सम्वन्ध छ । यो वा त्यो पार्टी भन्ने छैन, जुन पार्टिले युवा भावनाको सम्मान गर्छ, युवा नेतृत्व स्थापित गर्नेमा सहमती जनाउँदछ त्यो पार्टिनै मेरो रोजाइको दल हो । म नयाँशक्ती नुवाकोटको जिल्ला संयोजक छु र मेरो पार्टी नेकपा एमाले संग एकिकरण प्रकृयामा पनि छ ।
चुनाव जित्नुहुन्छ ?
नुवाकोट जिल्ला लाई समृद्ध पार्ने योजना के छ तपाइँसंग ?
म संग योजना छ, अनि सो योजनालाई मुर्तरुप दिने ईच्छाशक्ती पनि । जिल्लामा भएका प्राकृतिक र धार्मिक सम्पदा तथा मठमन्दिरलाई पर्यटकिय स्थलको रुपमा बिकसित गर्दै आन्तरिक तथा अन्तराष्ट्रीय पर्यटन बिकाश गर्न सकिने सम्भावना छ । जिल्लाका केहि क्षेत्रलाई मत्स्यपालन र पशुपालनको केन्द्रको रुपमा बिकास गर्न सकिन्छ ।
जिल्लाका आदिबासी तामाङ समुदायको संस्कृती र परम्पराको प्रवर्धन गरी होमस्टेको बिकाश गरेमा पर्यटन विकासबाट गरिवी निवारण हुनुका साथै बिदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ । स्थानिय सामुदायिक बन ब्यबस्थापनमा महिला दलित जनजाती लगायतको सहभागिता वृद्धि गर्दै आयआर्जन कृयाकलाप संग जोडी ठुलो लाभ पुर्याउन सकिन्छ । जिल्लाका बिभिन्न भागमा घरेलु कृषी तथा अन्य उत्पादनजन्य उधोग स्थापना गरि स्थानियहरुलाई रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ भने कृषी उत्पादन बृद्धी कार्यक्रम, नगदे बाली, कफीरसुन्तला खेती लाई प्राथमिकता दिएर न्युन आय भएका कृषकको आयाअर्जन बृद्धी गर्न सकिन्छ । लोडसेडिङमुक्त जिल्ला, प्रचुर धार्मिक पर्यटकिय सम्भाबना, व्यापारिक सम्भावना आदिको समुचित उपायोग गरी जिल्लालाई समृद्ध पार्न सकिन्छ ।
तपाईँको खाका नुवाकोट जिल्लाको समृद्धिको मात्र होकी अन्यत्रको पनि हो ?
हेर्नुस मेरो जिल्ला मेरो जग हो । जसरि जग बलियो नभै घर बलियो हुँदैन त्यसैगरी आफ्नो जिल्लाको समृद्धी नल्याइ म पुरै जिल्ला देशमा समृद्धी ल्याउछु भन्नु घरको जग बलियो नबनाई मेरो घरले ९ रेक्टरको भुकम्प थाम्छ भन्नु जस्तै हो । अर्को कुरा नुवाकोट जिल्लामेरो जन्मस्थान भएकोले पनि त्यहाँको भुबनावट, स्थानियवासिको मनस्थिति, समस्या र सम्भावनाको वारेमा मलाई राम्रोसंग थाहा छ ।
त्यहाँको जनमत बुझेर अगाडी बढ्न सकिने प्रशस्त आधार पनि छ । एकचोटी मौका पाउन हो भने पनि स्थानिय सरकार मार्फत पनि परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।
नुवाकोटका पुराना राजनैतिक दल र नेताको भबिष्य कस्तो देख्नुहुन्छ तपाइ ?
हेर्नुस नुवाकोटमा मात्र होईन सिंगो देशमा नै पुराना राजनैतिक दल र नेताको राजनिती अन्धकार देख्छु म त । समय पतिवर्तनशिल हुन्छ र समय अनुसार चल्न नसक्नेहरुको नामोनिशान मेटिने निश्चितप्राय छ ।
नुवाकोट जिल्लाकै कुरा गर्ने हो भने अबको निर्वाचन बाटै पुराना दल बढारिन्छ नै भनेर त म ठोकुवा गरेर भन्न सक्दिन । तथापी पुराना दल भित्रका पनि डेट एक्स्पायर्ड नेताहरु भने अबको निर्वाचन बाट बढारिन्छन जस्तो लाग्छ । जस्तो काङ्ग्रेस भित्रका रामशरण महत र अर्जुन समुह ले सायद अब नुवकोटमा चुनाव जित्दैनन नै । महत र केसिले नुवाकोटबासिको बिश्वास गुमाईसकेको अवस्था छ । काङ्ग्रेस भित्रकै प्रकासशरण महत र बहादुरसिंह लामाको बरु केहि समय राजनिती अझै कायम होला जस्तो लाग्छ ।
एमालेको राजनैतिक भबिष्य राम्रो देख्छु म जिल्लामा , जिल्ला अध्यक्ष नारायण खतिवडा अगाडी आउन सक्दछन । माओवादिका हितबहादुरले पनि चुनाव जित्दैनन्, उनमा जातिय संकिर्णता बढी देख्छु म । सबै जातजाती लाई समेट्नुभन्दा पनि तामाङ मात्रका नेता बन्न चाहन्छन उनि । माओवादीलाई अब चुनाव जित्न गार्हो छ नुवाकोटमा । जितीन भने बरु बिमला सुबेदिले जित्लिन । अब हुने चुनावमा नुवाकोटमा काङ्ग्रेस एमालेका प्रकाशबहादुर नारायण साथै माओबादी भित्रकी बिमला समुह कै प्रतिस्पर्धा हुने देख्छु म । मैले नेतृत्व गरेको नयाँशक्तिको अवस्था जिल्लामा राम्रो छ ।
अन्त्यमा एउटा प्रश्न नुवाकोटमा केन्द्रीय राजनितिमा स्थापित नेता प्रशस्तै छन्, उनिहरु संग प्रतिस्पर्धा गर्न गार्हो हुँदैन ?
हुँदैन । र फेरी मैले उनिहरुसंग प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेको पनि छैन । हिजोका दिनमा मानिसमा शिक्षा कम थियो तर आज घरै पिच्छे बिए, एमए पास गरेका मानिस जन्मिसके । ति पढेलेखेका मानिस लाई थाहा छ कि देश चलाउन उनिहरुको भावनाको कदर गर्ने इमान्दार युवा आवस्यक छ ।
देशमा यत्रो समस्या छ रोजगारी पाउनु चिठ्ठा पर्नु सरह भैसक्यो । भुकम्पपिडित अझै जस्ताको टहरोमा कष्टकर जिवन ब्यतित गरिरहेका छन । तपाइँले भनेका कुनचाँही केन्द्रिय नेताले यि समस्या समाधान गर्न पहल गरे त ।
उनिहरुका लागी बेरोजगार युवा झन्डा बोक्ने कार्यकर्ता हुन्, गाउँले किसान ५०० र १००० मा बिक्ने भोटर्स मात्र । यस्तो निच सोचाइ बोकेर कतिदिन राजनिती चल्छ ? कतिदिन नुवाकोटबासिले उनिहरुको झुट सहेर बस्ने र ? नुवाकोटका जनता अब लाटा छैनन । तथाकथित ठुला नेताको चर्तिकला देखिसके । अब उनिहरुलाई जनताले समर्थन गर्दैनन भन्नेमा म बिस्वस्त छु ।